Ciidamada booliiska Turkiga oo xiray boqolaal looga shaki qabo ururka Daacish kadib howlgalo ay ka sameeyeen dalka oo dhan - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldCiidamada booliiska Turkiga oo xiray boqolaal looga shaki qabo ururka Daacish kadib howlgalo ay ka sameeyeen dalka oo dhan
February 5, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Ciidamada booliiska Turkiga oo xiray boqolaal looga shaki qabo ururka Daacish kadib howlgalo ay ka sameeyeen dalka oo dhan. [Sawirka: Anadolu]
Ankara-(Puntland Mirror) Ciidamada booliiska Turkiga ayaa xiray ku dhawaad 450 qof oo looga shaki qabo ururka ISIS sidoo kale loo yaqaan (Daacish) kadib howlgalo ay ka sameeyeen dhammaan dalka Turkiga maanta oo Axad ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka amniga ah.
Ilo-wareedyada ayaa sheegay in dadka la qabtay ay u badanyihiin ajaaniib.
Sida ay ku warantay wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu, ciidamo kala duwan oo booliis ah ayaa howlgalada ka sameeyay ilaa iyo 18 gobol oo ay kamidyihiin Ankara, Istanbul, Kocaeli, Bursa, Izmir, Konya, Bingol, Adana, Sanliurfa, Gaziantep, Adiyaman, Malatya, Kilis, Hatay, Corum, Antalya, Diyarbakir iyo Van.
Ku dhawaad 60 looga shaki qabo ISIS ayaa lagu qabtay howlgal ka dhacay gudaha caasimada Ankara.
Intii ay howlgaladu socdeen, ciidamada booliiska ayaa gacanta ku dhigay dukumentiyo iyo qoryaha gacanta oo aan laysin lahayn.
Turkiga ayaa sanadadii u dambeeyay waxaa ka dhacayay weeraro qaraxyo ah oo dhiig badan ku daatay, kuwaasoo badankood masuuliyadooda ay sheegteen maleeshiyada ka dagaalanta gudaha Suuriya iyo Ciraaq ee Daacish.